I-Adobe Creative Cloud Express: Izifanekiso Ezinhle Zokuqukethwe Kwemidiya Yezokuxhumana, Amalogo, Nokunye Okuningi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 21, 2022 NgoMsombuluko, Februwari 21, 2022 Douglas Karr
Lapho uMari Smith ethi uyayithanda i- ithuluzi lokumaketha ku-Facebook, kusho ukuthi kufanelekile ukubhekisisa. Futhi yilokho kanye engikwenzile. I-Adobe Creative Cloud Express, ngaphambili eyaziwa ngokuthi I-Adobe Spark, iyiwebhu ehlanganisiwe yamahhala nesisombululo seselula sokudala nokwabelana ngezindaba ezibukwayo ezinomthelela. I-Creative Cloud Express ikwenza kube lula ukuqalisa ngamathani ezifanekiso eziklanywe ngobungcweti namafa wokuqukethwe kwenkundla yezokuxhumana, amalogo, nokuningi.
Nge-Adobe Creative Cloud Express, ungakha kalula izithombe zomphakathi, amalogo, amaflaya, izibhengezo, Izindaba ze-Instagram, izikhangiso, Izibhengezo ze-YouTube, Amaphosta, Amakhadi Ebhizinisi, Izithonjana ze-YouTube, nokuningi. Inkundla inezinkulungwane zezifanekiso kanye nezithombe zamahhala ongazisebenzisa.
Uma usungene usebenzisa i-ID yakho ye-Adobe noma ukungena ngemvume komphakathi, ungaqala iphrojekthi entsha noma ufinyelele amaphrojekthi wangaphambilini osuvele uwaqalile noma owuqedile. Inkundla yakhelwe ongaklami, ekuvumela ukuthi wenze noma yini oyidingayo, konke endaweni eyodwa, ngamathuluzi ahlakaniphile akuvumela ukuthi ukhiphe ingemuva, ugqwayize umbhalo, ungeze umkhiqizo wakho, nokunye okuningi. Ngokuthepha nje okumbalwa ungashintsha usayizi wokuqukethwe kwanoma iyiphi isayithi yenkundla yezokuxhumana futhi wengeze imiphumela yekhwalithi ye-Adobe Photoshop ngokuphazima kweso.
Ungakwazi futhi ukwabelana ngamalogo, amafonti, nezinye izici zomkhiqizo nethimba lakho, futhi uphrinte futhi wabelane ngamadokhumenti e-PDF ngezici ezixhaswe yi-Adobe Acrobat - ukuze uhlale ubeka umsebenzi wakho omuhle phambili. Sebenzisa endaweni yedeskithophu noma landa noma yiziphi izinhlelo zokusebenza zeselula ukuze uqalise!
I-Adobe Creative Cloud Express I-Creative Cloud Express iOS I-Creative Cloud Express ye-Android
Tags: i-adobe creative cloud Expressinhlansi ye-adobeikhasi le-adobe sparki-adobe spark postividiyo ye-adobe sparkizikhangisoividiyo egqwayizayoamabhanelaamakhadi ebhizinisidala ihluzodala imidwebo yezokuxhumanahlela ividiyoAmaflayaIzindaba ze-instagramama-logosamaphostayabelana ngezindabaihluzo zenhlaloUkuxoxa ngezindabaukuhlela ividiyoizindaba zewebhuamabhanela we-youtube